संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार ०३:०३ English
संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको समर्थनसहित सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ‘हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन ।
सभामुखले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दा सदनमा तालीको गडगडाहट चलेको थियो । स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध भएको छ । ७२ घण्टापछि विधेयकमा संशोधन आएमा त्यसलाई निर्णयार्थ पेश गरिने छ भने संशोधन नआएमा मुख्य विधेयकलाई पेश गरिने छ । संविधान संशोधन विधयेक २ तिहाईले पारित हुनु पर्ने ब्यबस्था छ ।
सो विधेयकमा विचार गरियोस् भनी बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार १०:०४ मा प्रकाशित